Semalt गुगल को लागी तपाइँको उत्पादन समीक्षा पृष्ठ अनुकूलन को लागी सुझाव
उत्पादन समीक्षा आजको बजार मा प्रयोगकर्ताहरु को लागी एक धेरै मतलब आउँछ। एक प्रयोगकर्ता केन्द्रित खोज ईन्जिन को रूप मा, गुगल पनि समीक्षा लाई धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही कारण हो कि वेबसाइटहरु लाई सुनिश्चित गर्न को लागी अधिक समय र संसाधनहरु लाई समर्पित गर्दछ कि उनीहरुको समीक्षा पृष्ठहरु उच्च रैंक र बाहिर खडा गरेर अधिक खरीददारहरु लाई रूपान्तरण गर्नुहोस्।
जब प्रयोगकर्ताहरु लाई एक उत्पादन अनलाइन किन्ने निर्णय, उनीहरु सामान्यतया समीक्षा को माध्यम बाट जान्न को लागी उत्पादन वा सेवा बाट के आशा गर्ने जान्छन्। उच्च गुणस्तरीय समीक्षाहरु पढ्दा उल्लेखनीय एक उपभोक्ता को अन्तिम निर्णय लाई असर गर्न सक्छ। धेरै पटक, एक उच्च गुणस्तरीय समीक्षा भएको छ कि एक उपभोक्ता एक उत्पादन किन्छ वा गर्दैन असर पार्नेछ।
के एक समीक्षा पृष्ठ यति महत्त्वपूर्ण बनाउँछ?
उपभोक्ताहरु लाई थाहा छ उनीहरु लाई थाहा छ कि उनीहरु आफै मा जब उनीहरु तपाइँको उत्पादन किन्छन्। विशेष गरी जब उनीहरु संग ब्रान्ड संग कुनै अघिल्लो अनुभव छैन। त्यस्ता अवस्थामा, एक समीक्षा पृष्ठ भएको छ कि उनीहरु सबै लाई थाहा छ उनीहरुलाई थाहा छ एक इशारा को रूप मा प्रमाणित गरीन्छ कि तपाइँको उत्पादन वास्तविक हो र तपाइँ तपाइँको उपभोक्ताहरु लाई तपाइँको उत्पादनहरु/सेवाहरु को आफ्नो वास्तविक राय प्रसारण मन पर्दैन।
समीक्षा ब्रान्ड द्वारा नियन्त्रण गरीएको हुदैन, धेरै अनलाइन पसलहरु उत्पादन र सेवाहरु को मूल्यांकन गर्न को लागी उत्पाद समीक्षा मा भरोसा गर्दछ।
गुगल यो प्रवृत्ति को बारे मा सजग छ जसको कारण गुगल एक नयाँ उत्पाद समीक्षा अपडेट लाई प्रत्यक्ष मा राख्छ। यो सुविधा समीक्षाहरु लाई प्राथमिकता दिन्छ कि उपभोक्ताहरु लाई एक उत्पाद मा अधिक अंतर्दृष्टि र विवरण संग प्रदान गर्दछ। अधिक गहिराई एक समीक्षा हो, अधिक जानकारी यो पाठक प्रदान गर्दछ। यो मामलाहरु जहाँ उत्पादन अनलाइन समीक्षा मेल खाँदैनन् को संख्या सीमित गर्दछ।
यस बिन्दु मा, गुगल भन्छन कि नयाँ उत्पाद समीक्षा अपडेट एक कोर अपडेट हैन, तर यो अझै पनी महत्वपूर्ण छ, र हामी तपाइँको वेबसाइट लाई यी नयाँ मापदण्डहरु लाई पूरा गर्न मद्दत गर्न समर्पित छौं।
कसरी गुगल उत्पादन अपडेट को लागी तपाइँको वेबसाइट लाई अनुकूलित गर्ने
लामो र अधिक जानकारीमूलक समीक्षा लेख्नुहोस्
लामो र सूचनात्मक समीक्षा भएको SERP मा यसको आफ्नै मा रैंक। तपाइँलाई थाहा हुनु पर्छ कि गुगल सामग्री को मूल्यवान छ कि जानकारीमूलक र मूल्यवान छ। यो तर्क पनि समीक्षा मा लागू हुन्छ। लामो समीक्षा सामान्यतया एक उत्पादन वा सेवा को एक वास्तविक र सही प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व गर्दछ।
गुगल जान्दछ कि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु उत्पादन समीक्षा, विशेष गरी समीक्षाहरु कि गहन अनुसन्धान पछि लेखिएको थियो सराहना। उनीहरु पातलो सामग्री को तुलना मा एक प्रयोगकर्ता को लागी अधिक मतलब राख्छन्, जो केवल उत्पादनहरु को सारांश दिन्छ।
यदि तपाइँ हाल तपाइँको वेबसाइट मा मात्र छोटो उत्पादन समीक्षा छ, तपाइँ सम्पर्क गर्नु पर्छ Semalt त्यो ठीक गर्न। यदि तपाइँ तपाइँको उत्पादन समीक्षा पृष्ठ यातायात मा योगदान गर्न को लागी तपाइँको वेबसाइट र यसको रूपान्तरण को लागी योगदान गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ लामो समीक्षा को जरूरत छ कि गहिराई र तथ्यपरक छन्।
सटीक विवरण दिनुहोस्
तपाइँको समीक्षा र उत्पादन हात मा हात मा काम गर्नु पर्छ। तपाइँ समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न कि भन्नुहोस् कि तपाइँको उत्पादन समर्थन गर्दैन। तपाइँको उत्पादन को एक सटीक विवरण दिने तपाइँको उत्पादन समीक्षा को एक आवश्यक भाग हो।
जब प्रयोगकर्ताहरु तपाइँको समीक्षा पढ्छन्, उनीहरुलाई के आशा गर्ने जब उनीहरु तपाइँको उत्पादन मुठभेड को एक राम्रो विचार प्राप्त गर्नु पर्छ।
चीजहरु लाई सजिलो बनाउन को लागी, तपाइँ तपाइँको सामग्री को भाग को रूप मा छविहरु र भिडियोहरु लाई सामेल गर्न सक्नुहुन्छ। दृश्य सामग्री तपाइँको पाठक को दिमाग मा तपाइँको उत्पादन को एक ज्वलन्त छवि रंग।
सही विवरण दिँदै छविहरु वा तपाइँको उत्पादनहरु को भिडियो प्रदान गर्न मा बन्द छैन। तपाइँलाई यो कसरी प्रयोग गरीन्छ व्याख्या गर्न को लागी आवश्यक छ। सबै उत्पादनहरु को उपयोग गर्नु भन्दा पहिले प्राविधिक ज्ञान को आवश्यकता छैन, तर त्यहाँ तपाइँको उपभोक्ताहरु लाई तपाइँको उत्पादन बाट सबै भन्दा धेरै कसरी प्राप्त गर्ने भनेर व्याख्या गर्न मा कुनै हानि छैन।
वर्णन गर्नुहोस् कि उत्पादन कसरी प्रदर्शन गर्दछ। उपभोक्ताहरु लाई उनीहरुको अनुसन्धान संग सहायता को लागी केहि उत्पादनहरु मा प्रदर्शन सम्बन्धी डेटा मा ध्यान दिनुहोस्।
प्रमाणित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ
उपभोक्ताहरु जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँ एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ कि तपाइँ के बारे मा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँको सामग्री तपाइँको राय भरोसा गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनु पर्छ। इन्टरनेट मा जानकारी को धेरै स्रोतहरु संग, यो गलत जानकारी सामना गर्न को लागी सामान्य छ। प्रासंगिक मानिन्छ, तपाइँको सामग्री देखाउनु पर्छ कि तपाइँ एक विश्वसनीय पेशेवर हुनुहुन्छ।
यस अपडेट को भाग को रूप मा, Google ले विशेषज्ञ ज्ञान देखाउने महत्व लाई हाइलाइट गर्दछ जब तपाइँको उत्पादन को समीक्षा। हामी यो पनि जान्दछौं कि विशेषज्ञता E-A-T मा आवश्यक मध्ये एक हो। यो, निस्सन्देह, यो एक महत्वपूर्ण रैंकिंग कारक बनाउँछ।
यदि एक ग्राहक को लागी एक उत्पाद समीक्षा लेख्न को लागी सोध्नुभयो, हामी गुणस्तरीय समय बिताउँछौं आफैलाई उत्पादन संगै परिचित। यो मात्र मौलिक बनाउँछ, तर हामी एक सटीक र यथार्थवादी समीक्षा पाठकहरु भरोसा गर्न सक्छन् उद्धार। तपाइँका दर्शकहरु लाई देखाएर कि तपाइँ भरोसेमंद हुनुहुन्छ, विषयहरुमा तपाइँको राय अधिक वजन लिन सक्छ।
राम्रो र नराम्रो समावेश गर्नुहोस्
यो तपाइँको समीक्षा संग सन्तुलित रहन को लागी महत्वपूर्ण छ। यो केहि सबै उपभोक्ताहरु संग ठीक छैन। यसको कारण यो हो कि कोहि पनि आफ्नो ब्रान्ड को बारे मा भन्न को लागी कुनै नराम्रो कुरा चाहँदैनन्। तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि समीक्षाहरु समीक्षा रहन्छन् र एक उत्पादन बजार को लागी अर्को तरीका छैन।
सन्तुलित भएर, तपाइँ क्रेताहरु जो उत्पादन को आवश्यकता छ मनाउने एक राम्रो मौका खडा। राम्रो समीक्षा बनाउन को लागी, सामग्री तटस्थ रहनु पर्छ। यसको मतलब तपाइँ तपाइँको समीक्षा मा ईमानदार हुनुहुन्छ। गुगलले वेबसाइटहरु लाई सल्लाह दिईएको छ कि उनीहरु लाई समीक्षा गरीएको उत्पादनहरु को लाभ र हानि बारे चर्चा गर्न को लागी।
तपाइँ बुझ्नै पर्छ कि नकारात्मक "खराब" को रूप मा तपाइँको ब्रान्ड रंग गर्दैन; यो मात्र सम्भव letdowns देखाउँछ। यो तपाइँको ग्राहकहरु लाई बताउँछ जहाँ तपाइँको उत्पादन सबैभन्दा राम्रो छैन। जे होस्, तपाइँको सकारात्मक क्षेत्रहरु मा एक प्रकाश चमक छ जहाँ तपाइँ धेरै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ।
देखाउनुहोस् के तपाइँको उत्पादन बाहिर खडा हुन्छ
कुनै फरक पर्दैन कसरी तपाइँको उत्पादनहरु विशेष छन्, त्यहाँ एक ठूलो संभावना छ कि अन्य उत्पादनहरु समान विशेषताहरु संग अवस्थित छ। आज बजार मा कुनै पनी दिईएको उत्पादन को धेरै किस्महरु संग, तपाइँ तपाइँको उत्पादन फरक बनाउँछ भनेर देखाउन को लागी आवश्यक छ।
तपाइँको समीक्षाले पाठकहरुलाई प्रश्नको उत्तर "किन?" उनीहरु हेर्न को लागी उनीहरु तपाइँको उत्पादन संगै जानु पर्छ, र तपाइँको प्रतियोगिताहरु मा सक्षम हुनुहुँदैन। उपभोक्ताहरुलाई अन्धकार मा छोड्न सकिदैन कि कुन उत्पादन अरु भन्दा राम्रो छ। यो केहि तपाइँ एक ब्रान्ड को रूप मा तपाइँको दर्शकहरु लाई बताउनु पर्छ।
एक उत्पादन समीक्षा तपाइँको पाठकहरु लाई तपाइँ के पेशकश गर्नुहुन्छ कि अरु गर्न सक्दैनन् भन्नु पर्छ। तपाइँका पाठकहरुलाई तपाइँ छनौट गर्न को लागी एक कारण दिनुहोस्। पनी मामला मा जहाँ उत्पादन मात्र थोरै अरु बाट फरक छ, यो यो विशिष्टता हाइलाइट गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ, उपभोक्ताहरु लाई यी थोरै मतभेदहरु को बारे मा सचेत गराउनु पर्छ ताकि उनीहरु के किन्ने निर्णय गर्न सक्छन्।
जब एक उत्पादन समीक्षा लेख्दै, हामी केहि पनी बेवास्ता गर्न सक्दैन कि तपाइँको उत्पादनहरु लाई अलग सेट मा मद्दत गर्न सक्छ।
तपाइँको वेबसाइट मा प्रत्येक पृष्ठ एक भूमिका यो खेल्नु पर्छ, तपाइँको उत्पादन समीक्षा पृष्ठ सहित। त्यहाँ आफ्नो उत्पादन समीक्षाहरु हाल Google को नयाँ उत्पादन समीक्षा अपडेट को लागी अनुकूलित छैन भने आतंकित गर्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन।
सबै गुगल अपडेटहरु जस्तै, उत्पादन समीक्षा अपडेटहरु लाई सम्भव सबै भन्दा राम्रो अनुभव संग तपाइँको आगन्तुकहरु लाई प्रदान गर्ने उद्देश्य हो। धेरै उत्पादन संस्करणहरु संग, एक उत्पाद समीक्षा पृष्ठ भएको उपभोक्ताहरु लाई उनीहरुको आवश्यकता को लागी सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्न को लागी मनाउन को लागी आवश्यक छ। यो कुनै आश्चर्य को कुरा हो कि गुगल उत्पादन समीक्षा मा यति चासो छ।
तपाइँको समीक्षा अपडेट गर्नु केहि हो Semalt संग मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै वेबसाइट मालिकहरु लाई यो काम पेशेवरहरु लाई प्यादा गर्न को लागी मनपर्छ किनकि यो समय खपत हुन सक्छ र धेरै काम को आवश्यकता छ, तपाइँको समीक्षा पृष्ठ को वर्तमान स्थिति मा निर्भर गर्दछ।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस आज र हाम्रा विशेषज्ञहरु तपाइँको उत्पादन समीक्षा पृष्ठहरु लाई अनुकूलन हेर्नुहोस्।